'Netflix na Chills' na -ewetara obi ụtọ niile maka Halloween!
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Netflix na Chills' na -ewetara obi ụtọ niile maka Halloween!
by Waylon Jọdan September 7, 2021
by Waylon Jọdan September 7, 2021 12,062 echiche
Ọ ga -abụ Septemba. Ọrụ nkwanye ọ bụla na ọwa eriri na -ebuputa mmemme ha maka oge kacha dị egwu n'afọ, anyị nọ ebe a maka nkeji ọ bụla. Ọ bụghị ihe ijuanya, Netflix na Chills abịaghachila ọzọ na mmemme ọhụrụ na -atọ ụtọ n'ime ọnwa Septemba na Ọktọba.
Ọbụghị naanị na ha na -arụpụta usoro ọhụrụ, mana na Wenezde ọ bụla, nnukwu onye na -asọ asọ ga -ewepụta ihe nkiri ọhụrụ na -emenye ụjọ iji mee ka ị na -abịa ọzọ maka oge niile. Site na ihe nkiri ezinụlọ ruo oke egwu, Netflix na Chills nwere ihe maka onye ọ bụla.
Lelee ntụrụndụ niile na -abịa n'okpuru ma echefula ijide eserese dị na ala maka ntuziaka ntụnye aka ngwa ngwa!
Netflix na Chills Septemba, 2021
Septemba 8, N'ime Night Oge 2:
Ka anyị na -ahapụ ndị njem ụgbọ elu 21 anyị na njedebe nke Oge 1 ebe anyị mechara nweta mgbaba site na anyanwụ na bonka ochie ndị agha Soviet na Bulgaria, ọ dị mwute ikwu na ezumike ha na -ebelata mgbe ihe mberede mebiri akụkụ nke nri ha. Na mberede chụpụrụ n'elu ala, ha ga -aga na Global Seed Vault na Norway dị ka mbọ siri ike iji nweta nlanarị ha. Mana ọ bụghị naanị ha nwere echiche ahụ… N'aha nke kacha mma, ndị otu anyị ga -ekewa, soro ndị ọrụ ndị ọbịa ọbịa mara mma, ma chụọ àjà n'ọsọ megide oge.
Septemba 10, lucifa Oge Ikpeazụ:
Nke a bụ ya, oge ikpeazụ nke Lucifer. N'ezie oge a. Ekwensu n'onwe ya aghọọla Chineke. Gịnị mere na ọ na -ala azụ? Ka ụwa na -amalite itisa n'enweghị Chineke, gịnị ka ọ ga -eme na nzaghachi? Sonyere anyị ka anyị na -asị Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella na Dan ọmarịcha obi ụtọ. Weta anụ ahụ.
Septemba 10, -eri anụ:
Na ngwụcha ngwụcha ngwụcha ezumike ya, Roman, nwanne ya nwoke Albert na ndị enyi ha na -aga njem mkpagharị n'ime ọhịa. Mgbe ndị otu ahụ nụrụ ụda egbe dị nso, ha na -ekwu na ọ bụ ndị dinta n'ime ọhịa. Agbanyeghị, n'oge na -adịghị anya, ha na -achọsi ike maka nlanarị mgbe ha matara na ọ dabara n'aka onye na -agba ụta dị omimi.
Roman (David Kross), Albert (Hanno Koffler), Peter (Robert Finster) na anụ anụ na Netflix na Chills
Septemba 15, Akwụkwọ akụkọ abalị:
Mgbe Alex (Winslow Fegley), nwa nwoke nke akụkọ na -emenye ụjọ, bụ onye ajọ amoosu (Krysten Ritter) tọrọ n'ime ụlọ anwansi ya, na ọ ga -akọkwa akụkọ na -eyi egwu kwa abalị iji dịrị ndụ, ya na onye mkpọrọ ọzọ, Yasmin ( Lidya Jewett), ịchọta ụzọ mgbapụ.
Septemba 17, Egwuregwu Squid:
A na -ezigara ndị mmadụ nọ n'ihe egwu dị oke mkpa ego oku a dị omimi ka ị sonye n'egwuregwu ahụ. A na -akpọchi ndị sonyere 456 sitere n'akụkụ niile nke ndụ n'ime ebe nzuzo ebe ha na -egwu egwuregwu iji merie ijeri 45.6 meriri. Egwuregwu ọ bụla bụ egwuregwu ụmụaka ọdịnala Korea dịka Red Light, Green Light, mana nsonaazụ mfu bụ ọnwụ. Onye ga -abụ onye mmeri, gịnịkwa bụ ebumnuche n'azụ egwuregwu a?
Septemba 22, Ntinye:
Mgbe di na nwunye kwagara n’obere obodo, mbuso agha nke ụlọ na-eme ka nwunye nwee obi nkoropụ na obi abụọ na ndị gbara ya gburugburu abụghị ndị ha bụ.
Septemba 24, Mass abalị:
site Nwepu nke Ụlọ Nna Onye okike Mike Flanagan, N'etiti abalị na -akọ akụkọ banyere obere agwaetiti dịpụrụ adịpụ, nke na -akwalite nkewa ya ugbu a site na nlọghachi nwa okorobịa ihere (Zach Gilford) na ọbịbịa onye ụkọchukwu nwere ọmarịcha (Hamish Linklater). Mgbe ọbịbịa nna Paul na agwaetiti Crockett dabara na ihe omume na -akọwaghị na ihe yiri ka ọ bụ ọrụ ebube, ịnụ ọkụ n'okpukpe ọhụrụ na -ejide obodo - mana ọrụ ebube ndị a na -efu ọnụ?
Septemba 29, Onye Chestnut:
E debere nwoke Chestnut na mpaghara dịpụrụ adịpụ nke Copenhagen, ebe ndị uwe ojii na -eme nchọpụta dị egwu n'otu ụtụtụ October. A hụrụ otu nwa agbọghọ ka e gbuchara ya n'ọgbọ egwuregwu ma otu aka ya efu. N'akụkụ ya ka otu obere nwoke e ji ahịhịa ji mee dina. E kenyere onye nyocha na -eto eto Naia Thulin (Danica Curcic) n'okwu a, yana onye mmekọ ọhụrụ ya, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). N'oge na -adịghị anya, ha ga -achọpụta ihe akaebe dị omimi na nwoke chestnut - ihe akaebe na -ejikọ ya na nwa agbọghọ furu efu otu afọ gara aga wee chee na ọ nwụrụ - nwa nwanyị onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Rosa Hartung (Iben Dorner).
Septemba 29, Ọ Dịghị Onye Pụtara Ndụ:
Ambar bụ onye mbịambịa na-achọ nrọ nke America, mana mgbe a manyere ya ịbanye n'otu ụlọ n'ụlọ ndị ọbịa, ọ hụrụ onwe ya na nro na-enweghị ike ịgbapụ.
Netflix na Chills na Ọktoba 2021
Ọktoba 1st, Nwamba egwu:
Na ụbọchị ọmụmụ ya nke iri na abụọ, Willa Ward na-enweta onyinye purr-fect nke na-emepe ụwa nke ịta amoosu, anụmanụ na-ekwu okwu na ọtụtụ ndị enyi ya.
Ọktoba 5, Gbanahụ onye na -eme ya:
Newbọchị Ọhụrụ nwere ike ịlanarị ihe ịtụnanya dị na nnukwu ụlọ Undertaker? Ọ dị gị n'aka ikpebi ọdịnihu ha na mmemme WWE nke isiokwu a pụrụ iche.
Agbanahụ The Undertaker. (LR) Big E, Xavier Woods, Kofi Kingston na The Undertaker na mgbapụ Onye na -arụ ọrụ. c. Netflix © 2021
Ọktoba 6, O nwere Onye Nọ n’ Houselọ Gị:
Makani Young esila na Hawaii kwaga nwayọ, obere obodo Nebraska ka ya na nne nne ya biri wee gụchaa ụlọ akwụkwọ sekọndrị, mana ka ngụkọ ngụsị akwụkwọ bidoro, ụmụ klas ya na-egbu ọchụ na-ezube ikpughere obodo ha niile ihe nzuzo ha, na-eyi egwu. ndị ọ metụtara mgbe ha na-ekpuchi ihu dị ka ndụ. Site na ihe omimi dị omimi nke ya, Makani na ndị enyi ya ga -achọpụtarịrị onye gburu ya tupu ha aghọọ ndị o metụtara. E nwere onye nọ n'ime ụlọ gị dabeere na Stephanie Perkins 'New York Times akwụkwọ akụkọ kacha ere nke nwere otu aha ma dee Henry Gayden maka ihuenyo (Shazam!), nke Patrick Brice duziri (Oke) ma mepụta James Wan's Atomic Monster (Nkwado) na Shawn Levy's 21 Laps (ọbìa Ihe). (Enweghị foto Netflix na Chills ma ọ bụ ụgbọala na -adọkpụ dị n'oge a.)
Ọktoba 8, Akụkọ ifo gbara ọchịchịrị & Grimm:
Soro Hansel na Gretel ka ha na -apụ na akụkọ nke ha banye na akụkọ ọjọọ na akụkọ ọjọọ jupụtara na ihe ijuanya - na egwu - ihe ijuanya.
Ọktoba 13, Ọchịchọ Ọkụ:
Otu nwa agbọghọ dina ka ọ na -anwụ n'ebe dị anya. Otu nwata nwoke nọ n'akụkụ ya. Ọ bụghị nne ya. Ọ bụghị nwa ya. Ha niile na -akọ akụkọ na -awụ akpata oyi n'ahụ nke mkpụrụ obi agbajikwa, ihe iyi egwu na -adịghị ahụ anya, na ike na enweghị olileanya nke ezinụlọ. Dabere na akwụkwọ akụkọ Samanta Schweblin nke mba ụwa nabatara nke ọma.
FEVER DREAM (L ruo R) Emilio Vodanovich dị ka David na María Valverde dị ka Amanda na FEVER DREAM. Kr. NETFLIX © 2021
Ọktoba 15, Ememe Halloween nke Sharkdog:
Onye ọ bụla 'ọkacha mmasị shark/nkịta ngwakọ na -akwado maka ọpụrụiche Halloween pụrụ iche!
Ọktoba 15, ị Oge 3:
N'oge nke atọ, Joe na Ịhụnanya, ndị lụrụ ugbu a ma na-azụ nwa ha, akwagala na Madre Linda nke dị na mgbago mgbago ugwu California, ebe ndị ọchụnta ego teknụzụ nwere ihe ùgwù, ndị na-ede blọgụ mama na-ama ikpe na ndị na-ahụ maka biohackers ama ama. Joe raara onwe ya nye n'ọrụ ọhụrụ ya dị ka di na nna mana ọ na -atụ egwu mkpali na -egbu egbu nke ịhụnanya. Mgbe ahụ enwere obi ya. Nwanyị ọ na -achọ kemgbe oge a, ọ nwere ike ibi n'akụkụ ọzọ? Ịgbapụta n'ime ọnụ ụlọ dị n'okpuru ala bụ otu ihe. Mana ụlọ mkpọrọ nke alụmdi na nwunye zuru oke maka nwanyị maara ihe na aghụghọ gị? Ọfọn, nke ahụ ga -egosi ụzọ mgbapụ dị mgbagwoju anya karị.
Ọktoba 20, Abalị abalị:
Iji nweta ego ọzọ, nwa akwụkwọ mahadum Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) na -enwu ọkụ dị ka ọkwọ ụgbọ ala otu abalị. Ọrụ ya: chụpụ ụmụ agbọghọ abụọ dị omimi (Debby Ryan na Lucy Fry) gburugburu Los Angeles maka oriri oriri abalị. N'ịbụ onye amara nke ndị ahịa ya dọọrọ n'agha, n'oge na -adịghị anya ọ matara na ndị njem ya nwere atụmatụ nke ya maka ya - yana akpịrị ịkpọ nkụ nke ọbara. Ka abalị ya na -enweghịzi ike, Benny na -atụba n'etiti agha nzuzo nke na -etinye ebo vampires na -asọrịta mpi megide ndị na -echebe ụwa mmadụ, nke nwanne ya nwoke (Raúl Castillo) na -edu, onye ga -akwụsị ihe ọ bụla iji zighachi ha azụ. n'ime onyinyo. Ka ọwụwa anyanwụ na -abịaru nso, a na -amanye Benny ịhọrọ n'etiti egwu na ọnwụnwa ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ dịrị ndụ wee chekwaa Obodo ndị mmụọ ozi.
EZI NKE (2021)
Ọktoba 27, Anya mmiri:
Kate Siegel, Jason O'Mara, na Dule Hill kpakpando na fim a gbasara nwanyị na -enweta ihe karịa ka ọ na -ere ahịa mgbe ọ na -achọ enyemaka nke onye na -agwọ ọrịa ọgwụ.
TBD nke October, Locke & Igodo Oge 2:
Oge nke abụọ na -eburu nwanne Locke n'ihu ka ha na -ama jijiji ịchọpụta ihe nzuzo nke ezinụlọ ha.
TBD nke October, Ọ dịghị onye na -ehi ụra n'ọhịa n'abalị a, Nkebi nke 2:
Nsonaazụ maka ihe nkiri egwu Poland nke 2020, Ọ dịghị onye na -ehi ụra n'ọhịa